🥇 ▷ iOS 12.4, Apple joojinta saxeexyada ✅
iOS 12.4, Apple joojinta saxeexyada
Sida caadiga, Apple leeyahay hakad galisay nidaamka saxiixa 12.4, sidaas baajinta suurtagalnimada samaynta hoos u dhigid noocaas. Kuwa doonaya inay soo celiyaan wixii ay lahaayeen iPhone marka la eego imaatinka nooca cusub ee iOS 13, sidaa darteed ayaa hadda lagu qasbi doonaa in la isticmaalo nooca iOS 12.4.1.
Kala go’ida uu saxeexanyahay macruufka 12.4 ee ay saxeexday Apple, runtii, waxay ka imaan kartaa soo saarista cayayaanka u oggolaatay fulinta dilidda xaq u version hore ee macruufka. Qarixi taas Apple si dhakhso ah ayaa loo hagaajiyay nooca dambe, oo ah tan kaliya ee lagu rakibi karo.
MA AHA IN LAGU SAMEEYO IN LAGU SIIYO INGIRIISKA IOS 12.4
iPhone XR, iPhone “qiimo jaban” oo lagu soo bandhigay Sebtember 2018 | Evosmart.it
Haddaba, haddii aad doonaysid inaad Rabbiga samayso xabsi guri qalabkaaga macruufka, waan kugula talineynaa ha cusboonaysiin nooca ugu dambeeya ee la heli karo, maadaama aysan dib dambe suurta gal u noqon doonin in dib loo noqdo oo markaa, ay uga faa’iidaystaan ​​cillad amni.
Habka saxiixa oo iOS 12.4.1sidoo kale waxay noqon doontaa ugu dhakhsaha badan baa la kansalay sidoo kale loogu talagalay dhammaan aaladahaas ka heli doona casriyeynta xasilloonida ee macruufka 13-ka Sebtember 19-keeda. Xusuusnow sii deynta nooca xiga ee macruufka, iOS 13.1, ayaa loo sameeyay 30 Sebtember 2019, sidaasna u calaamadeeyay wakhti firfircoon oo ah qaybta barnaamijka softiweerka Apple.
Sidoo kale Akhri Apple sii daayay macallinka iOS 12.4 iyo macOS 10.14.6
Saxeexyada iOS 12.4.1 iyagu beddelkeeda u fur dhammaan qalabkaas oo aan lagu cusbooneysiin doonin macruufka 13, taas oo aan xasuusano inay ahayd iPhone 5s iyo iPhone 6/6 Plus, kaas oo gaadhay dhamaadka taageerada shirkadda.
Sikastaba, aan rajeyno midka cusub nooca iOS 13 caddee dhererka kii ka horreeyay iOS 12, kaasoo ahaa dad badan ayaa uga mahadceliyay degenaanshahooda iyo joogteynteedii muujiyey marka la barbar dhigo nooca ‘iOS 11’, idaha madow ee qoyska OS Apple.
Kuwa aan dooneynin inay ka faa’ideystaan ​​isudiyaarinta isla markaana qarka u saaran inay cusbooneysiiyaan macruufka 13, waxaan kugula talineynaa inay cusboonaysiiyaan macruufka 12.4.1, maaddaama nooca cusubi uu dammaanad qaadi karo heerar nabadgelyo oo ka sarreeya kii hore 12. 12.4, wixii intaas ka badan oo looga mahadnaqayo xalka cayayaanka.